Shiinaha IP66 Warshadaha xayeysiinta faaruqa ah iyo soo saarayaasha | Feilifu
Lambarka Moodalka ： AD1GEE 、 AD2GEE
• IP66 ayaa lagu qiimeeyay markii la isticmaalayay.
• Waxay bixisaa awood is-u-habeyn si ay ugu habboonaato dalabka.
• Aqbal 86x86mm, 86x146mm bedelka & godka, Sidoo kale aqbal MCB, SPD ama din contactor.
• Tooska hagaajinta & bareesada gudaha, looma baahna in laga saaro daboolka xayndaabka.
• Midabka daboolka waa la habeyn karaa.
Fursadaha Isku Xidhka Tusaalaha
Santuuqa xakamaynta karinta
86 * 86 S / godka
86 × 146 RCD + godka
86 * 146 godka mataanaha
Qalabka wareejinta si toos ah ayaa loo dhejin karaa ama loo beddeli karaa iyada oo aan la furin sanduuqa biyuhu. Guddi go'an ayaa hoos u foorarsanaya si loo siiyo qaab naqshadeynta, waxaa lagu xannibi karaa dalal kala duwan oo leh godka caadiga ah ee dheecaanka daadanaya, (naqshada faahfaahinta gaarka ah)
Dhammaan waddammada way xiri karaan daboolka ka dib isku xirnaanta fiilada, ilaalinta badbaadada ayaa lagu kalsoonaan karaa.
Gudiga furaha ayaa si toos ah loogu dhejin karaa dhinaca hore adigoon u janjeerin inuu furo sanduuqa biyuhu xiraan. Isla mar ahaantaana, naqshadeynta ayaa rakibi kara bareeraha wareegga yar, kororka iyo hagaha tareenka taageeraya qalabka rakibida. Isla badeecada waxaa lagu beddeli karaa hal ama laba 86 guddi iyadoo loo eegayo shuruudaha, si loo daboolo baahiyaha dadka isticmaala.
Hore: TM-502S Sanduuqa Isgoyska
Xiga: IP55 Taxanaha Wareeg dusha Biyuhu